तथ्यको कसीमा मिडिया विद्येयक « हाम्रो ईकोनोमी
प्रस्तुत विधेयकमा सजाय र जरिवाना २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। कैद सजायको भने कुनै प्रस्ताव छैन, तर मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भनिएको छ। यसमा सुधार गरेर जरिवाना रकम कम गर्न वा यस विधेयकमा सो प्रसंग नै नराखी हटाउन पनि सकिन्छ।
तर नयाँ कानुनी प्रबन्ध नियमनका लागि हो भने संसारमा केकस्तो अभ्यास र प्रबन्ध छ भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गरेर भने हेर्नुपर्ने नै हुन्छ। आचारसंहिता उल्लंघनको सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल कानुनमा जरिवानाको व्यवस्था नै नगर्ने हो भने एकीकृत सञ्चार कानुन वा केचाहिँमा गर्ने हो भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ। कति रकमसम्म जरिवाना गर्ने हो ? अथवा नियमनकारी निकाय नै आवश्यक छैन ? स्वनियमन (एम्बुड्समेन) मा पो जाने हो कि के हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ।
दुनियाँमा कहींकतै सजाय र जरिवानाको कानुनी प्रबन्ध छैन जस्तो गरी रुने र हाँस्ने (? ) नगरी सम्यक विमर्श गरेर आवश्यक प्रबन्ध गरेको नै यतिबेला परिपक्व कदम हुन जान्छ। यो सरकारले गर्ने कामकै क्षेत्र र दायराअन्तर्गत पर्छ।
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा आधारित भएर संशोधन, सुधार र आवश्यक जस्तोसुकै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तसर्थ विधेयकमा अनावश्यक होहल्ला नमच्चाई स्वस्थ बहस र विमर्श गरेको नै उचित हुन्छ। खासमा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो भनेर बहसलाई विषयान्तर गरेकोचाहिँ जिम्मेवार तरिका होइन !
यो बहस सदन, सडक र सरकार भएर खास प्रक्रियागत निर्णयका निम्ति संसद्मा पुगेको छ। र, त्यहाँ हुने बहसमा केन्द्रित भएर समुचित निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ। कानुन निर्माण प्रक्रियाको कखरा जान्ने जोकसैले संसद्मा दर्ता भएर विधिसम्मत प्रक्रियामा अघि बढेको विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्नु उचित र मनासिव दुवै मानिँदैन। अझ सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नु भनेको सारतः बहस जनतामा पुग्नु मानिन्छ। र, यसलाई बहसको एकदमै स्वाभाविक र गम्भीर क्षणका रूपमा लिइन्छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक सार्वभौम संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रामाणीकरण गरेपछि मात्र कानुन बन्न र लागू हुन जान्छ। तसर्थ विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता खोसिसकेको जस्तो गरी उत्तेजनात्मक रबैया प्रदर्शन नगरी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूमार्फत अत्यावश्यक र जरुरी संशोधन निर्धारित समयमा रीतिपूर्वक राख्न जोड गरेको नै उचित हुन्छ।
अझ यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि सभामुखले समितिमा पठाउने, जनमत बुझ्नसमेत पठाउन सक्ने र समितिको रायसहित आएपछि निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्न सक्ने स्थितिसमेत हुन्छ। अहिले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यस विधेयकमा अरू त प्रतिनिधिसभाका सभामुखले केही पनि गर्ने ठाउँ छैन ! किनभने, सभामुखको इच्छाअनुरूप मात्र विधेयक दर्ता हुने र उहाँको चाहनामुताविक मात्रै पारित हुने, अन्यथा हावा पनि चल्न नपाउने भन्ने अवस्था किमार्थ होइन र हुन सक्दैन।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न लागिपरेको दमनकारी र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य आन्दोलनमार्फत पे्रस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न लागेको अभियन्ता भनेर कोही भ्रममा पर्नु आवश्यक छैन। दुवैका ९९ प्रतिशत नै वैचारिक समानता र कार्यशैलीगत स्पष्टता रहेको छ।
बरु पूर्ववर्ती वैचारिक पृष्ठभूमि र सांगठनिक संलग्नता हेर्दा भने मन्त्री बाँस्कोटाप्रति बढी विश्वस्त हुन सकिएला ! बहुलवादी खुला समाजको प्रस्ट हिमायती उहाँ प्रेसलाई नियन्त्रण र दमन गर्ने विचार राख्ने व्यक्ति कहिल्यै होइन। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा उहाँ सामाजिक न्यायका लागि प्रबल हिमायती र समर्पित व्यक्ति रहेको इतिहास र वर्तमान खुला किताबजत्तिकै छर्लंग रहेको छ। यसको हेक्का सम्बद्ध सबैमा राम्रोसँग हुन आवश्यक छ। २१ जना सम्पादकहरूको सार्वजनिक ध्यानाकर्षण, मोर्चाबन्दी र चासोलाई समेत यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु उपयुक्त होला।
स्वनियमलाई सुनिश्चित र स्पष्ट पार्ने गरी बुँदा नं ६ को प्रस्तावमा आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमनमा अघि बढ्न उचित प्रोत्साहित गर्ने गरी स्पष्ट संयन्त्रगत प्रबन्ध गरिनुपर्छ। काउन्सिललाई आमसञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील स्वतन्त्र र स्वशासित निकायका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।
लेखक सूर्य थापा, नेता नेकपा